Aqalka Cad Ee Looga Arimiyo Maraykanka Oo Soo Saaray Go’aan Sigaarka Ku Saabsan Oo Muran Dhaliyay – Borama News Network
Qaddarka maaddada nikotiinka ee ku jira sigaarka lagu iibiyo Maraykanka ayaa lagu wadaa in la dhimo oo laga dhigo mid aad u yar ama aan la qabatimayn.
Aqalka Cad ayaa Talaadadii daaha ka rogay qorsheyaasha maamulka madaxweyne Joe Biden ay yihiin kuwo si weyn u dhimi kara dhimashada uu sababo kansarka.
Laakiin tallaabooyinkaas ayaa loo badinayaa inay ka hor yimaadaan warshadaha sigaarka ama tubaakada.
Sigaar-cabista ayaa weli ah sababta ugu badan ee dhimashada Mareykanka, sida ay sheegtay Xarunta Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) sanad kasta 480,000 ayaa u dhimata.
Maaddada Nicotine ee sigaarka ku jirta ayaa ah mid qabatin xoog badan leh laguna sheego waxa loogu yeero kiimiko dareen fiican leh oo ku sameysan tubaakada.
Bayaan uu soo saaray Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka (FDA) ayaa lagu sheegay in qorshayaasha la soo jeediyay ay xadeyn doonaan heerka nikotiinka ee sigaarka.
“In sigaarka iyo waxyaabaha kale ee tubaakada guban laga dhigo kuwo la yareeyo qabatinkooda ama aan la qabatimin waxay gacan ka geysan doontaa badbaadinta nolosha,” ayuu yiri Dr Robert M Califf oo ah Guddoomiyaha FDA.
Dr Calif ayaa xusay in hoos u dhigista heerarka nikotiinka ay sababi karto in dhallinyaro badan ay qabatimaan cabista sigaarka, waxayna kuwa hadda caba ka caawineysa inay joojiyaan.
Sanadka 2020, dad lagu qiyaasay 30.8 milyan oo qof oo qaangaar ah oo ku nool Mareykanka ayaa cabayay sigaarka. Dhaqaatiirta Guud ee Maraykanka ayaa ku qiyaasey in 87% dadka waaweyn ee sigaarka caba in ay billaabaan marka ay da’doodu gaartay 18 jir.
Arrintan ayaa timid ka dib markii maamulka Madaxweyne Biden ay bisihii Febraayo dejiyeen tallaabooyin hoos loogu dhigayo heerka dimashada kansarka ugu yaraan 50%, shan iyo labaatanka sano ee soo socota, taas oo qeyb ka ah ololaha loo yaqaanno Moonshot ee kansarka
Laakiin khubarada ayaa sheegaya in ay ku qaadan karto ugu yaraan hal sano Maamulka Cunnada iyo Dawooyinka (FDA) ee maamusha sigaarka, in uu soo saaro xeer la soo jeediyay oo ay dib u dhigi karaan mucaaradka, sida laga soo xigtay Washington Post.
Waxay ku dartay warshadaha tubaakada, oo ay u badan tahay inay si adag uga soo horjeedaan isbeddelka, ay caqabad ku noqon karaan sharciga ugu dambeeya ee maxkamadda.
Haayada Camuud Foundation Oo Deeq Raashin Ah Gaadhsiisay 600 Oo Qoys Oo Ku Nool Deegaanada Gobolka Salal
Bnnstaff Bnnstaff March 29, 2022